UHendricks uzophuthwa yithuba lokuyibamba kumaProteas koweTest azowudlala neSri Lanka ngoMgqibelo - Impempe
UHendricks uzophuthwa yithuba lokuyibamba kumaProteas koweTest azowudlala neSri Lanka ngoMgqibelo
December 23, 2020 December 23, 2020 Impempe.com
Umshwibi uBeuran Hendricks uzophuthelwa yithuba lokudlalela amaProteas ngemuva kokushiywa ngaphandle eqenjini elizobhekana neSri Lanka emidlalweni yeTest eqala ngoMgqibelo.
UHendricks noKeegan Petersen yibona abasalile eqenjini ebelinabadlali abangu-19 ngemuva kokuthi bonke abadlali behlolelwe iCoronavirus ngaphambi kokuya emgonqweni ePitoli. Bonke abadlali abangu-17 abaqale ukuziqeqesha ngoLwesithathu baphinde bahlolwa okwesibili kwatholakala ukuthi akekho onegciwane. AmaProteas aqale ukuziqeqesha ngokuphelele ngoLwesithathu.
UHendricks ubenethuba elihle lokuqala umdlalo. Udlalele amaProteas okokuqala ebhekene ne-England ngoJanuwari lapho ethathe khona amawikhethi amahlanu kwi-innings yesibili.
Njengoba uKagiso Rabada angekho ngenxa yokulimala, uHendricks uyena obengadlala ngokubambisana no-Anrich Nortje noLungi Ngidi. Ukungabi khona kukaHendricks kungase kunike ithuba uGlenton Stuurman ongakaze awadlalele amaProteas. UStuurman ucishe adlale ngendlela efanayo noVernon Philander osewagaxe emgibeni emidlalweni yomhlaba yekhilikithi.
UPetersen yena abemancane vele amathuba okuthi adlale ngoba abadlali abavamise ukuthi ukubhetha baphelele bonke.
Umdlalo wokuqala useCenturion, kanti uqala ngo-10 ekuseni.
Isikwati samaProteas sesimi kanje: Quinton de Kock (ukaputeni), Temba Bavuma, Faf du Plessis, Dean Elgar, Sarel Erwee, Keshav Maharah, Aiden Markram, Wiaan Mulder, Lungi Ngidi, Anrich Nortje, Dwaine Pretorius, Migael Pretorius, Lutho Sipamla, Glenton Stuurman, Rassie van der Dussen, Raynard van Tonder noKyle Verreyne
Previous Previous post: IPirates iwuqale kahle ngewini umkhankaso wayo kwiCAF Confederation Cup
Next Next post: UZinnbauer ubuye ejabule iPirates ikhombisa ubuqhawe ezimeni ezinzima e-Angola